Futhi ngenzani ngendiza yami? Inkinga yomhlaba | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukuhamba kwe-Absolut | | abanye
Ukungena endaweni yesehlakalo se i-coronavirus Iguqule yonke iplanethi ibheke phansi. Amanye amazwe adlulile noma acwiliswe esigabeni esibucayi sokutheleleka kanti amanye amazwe aseqala ukubona ukuthi amacala amaningi avela kanjani emingceleni yawo.
Okuqale eChina njengosongo oluncane sekuyinto ekhathazeka kakhulu kuzo zonke izakhamizi. Ukushesha nokushesha okusakazeka ngayo nokuntuleka kwemigomo kanye nokwelashwa kubangele ukuthi abantu abangaphezu kwama-250.000 abavela kuwo wonke amagumbi omhlaba batheleleke futhi abangaphezu kuka-10.000 XNUMX bafe. Kungakho ohulumeni abaphakathi bezwe ngalinye baphoqeleka ukuba bathathe izinyathelo ezingavamile.
1 Ukudilizwa kokukhanselwa. Kuthiwani ngendiza yami?
2 Umzila wokuphunyuka kumathikithi ashibhile
Ukudilizwa kokukhanselwa. Kuthiwani ngendiza yami?
ESpain, iqiniso lokuthi igciwane lisakazeka masinyane kusho ukuthi, ukulinqanda ukuthi liqhubeke nokukhula lize lifike ekuweni kohlelo lwezempilo lukazwelonke, uHulumeni unqume ukuthi isimo se-alamu ephoqa ukuthi izindawo zokucima ukoma, izitolo, amabhizinisi kuvalwe futhi ikwenqabele ukuhamba kwabantu ngokukhululeka, kuphoqa izakhamizi ukuthi zihlale zivaleleke emizini yazo.
Lesi silinganiso, futhi, sithinta nezindiza, ezihlaselwe i- ukudilika kokukhanselwa. Ngokomthetho wase-Europe, abavakashi banelungelo lokubuyiselwa imali yamathikithi abo ngenxa yokukhanselwa kwezindiza. Ngaphandle kwaleli lungelo, ezinye izinkampani ziyenqaba ukubuyisa imali futhi zinikeze ezinye izindlela, njengokuhlehlisa indiza noma ukushintshanisa ithikithi ngevawusha, elingana nenani lamathikithi, ukuthenga enye indiza eya kwenye indawo ngolunye usuku. . Ezinye izinkampani, noma kunjalo, zinikeza kuphela ithuba lokuhlehlisa indiza.
La ukwesulwa kwezindiza nokubuyiselwa kwemali yenani kumakhasimende ubeke izindiza eziningi esimweni esibucayi, ikakhulu ngenxa yokushoda kwemali. Kungakho befuna ezinye izindlela ezifana nalezi esezishiwo. Kungenxa yalesi simo, kungenxa yabantu okumele babuyiselwe ezweni futhi ngenxa yemvula yezimangalo yokuthi izintambo eziningi zezinsizakalo zamakhasimende ezindiza ziwile, okwenza kube nzima ukufeza izimangalo. Njengoba ubhekene nale panorama yobunzima, kunabahambi abaningi abakhetha ukungazenzi izimpilo zabo zibe nzima futhi bangasebenzisi ilungelo labo lokubuyiselwa inani lamathikithi.
Umzila wokuphunyuka kumathikithi ashibhile
Into ejwayelekile ukuthi uhlale ubheka izindiza ezingabizi kakhulu ezitholakalayo. Kumele kuqashelwe ukuthi intengo yamathikithi Kuya ngokuhlukahluka njengezinsuku ezitholakalayo zokuhamba, usuku lwesonto lendiza - kunezinsuku ezibiza kakhulu kunezinye - ubude bendiza, inani lokuma kanye nezikhathi zokuhamba nezokufika.
Ukuhambahamba kuwo wonke ama-web kuyindlela engcono yokuthola eyodwa indiza eshibhile. Enye indlela ukusebenzisa I-VPN yamathikithi endiza. Futhi kungenye yemingcele ethonya intengo yezindiza yindawo lapho kwenziwa khona usesho.
Una i-VPN yinethiwekhi yangasese ebonakalayo ongayixhuma kuyo i-inthanethi. Kuyindlela yokuxhumana ephephe kakhulu kunokuxhumeka ngamanethiwekhi omphakathi abonakalayo, anganikeli ukuvikelwa kwekhwalithi kubasebenzisi be-Intanethi ekuhlaselweni okungenzeka. I-VPN ibethela amaphakethe wedatha futhi ifinyelela i-inthanethi kusuka kukheli elihlukile le-IP kunelangempela. Yingakho i-VPNs ikuvumela ukuthi udlule ama-geoblocks, ngoba inethiwekhi yangasese yangasese ikunikeza ithuba lokukhetha izwe elingelakho - kulokhu, eSpain. Leyo IP yamanga iyona eyenza ukuthi abasebenzisi bakwazi ukweqa izingidi. Isibonelo, e-China awukwazi ukufinyelela ku-Facebook, kepha uma sixhuma ku-inthanethi e-China sivela ku-VPN, ikheli layo le-IP, yisho elilodwa, i-France, isisetshenziswa esizama ukuxhuma kuso ukuthi siseFrance hhayi I-China, ngakho-ke, izovumela ukufinyelela ku-Facebook. Lokhu kwaziwa kwama-VPNs kusivumela nokuthi senze izenzo ezinjengokuxhuma kupulatifomu yevidiyo nokukhetha ikhathalogi yale ndawo yesikhulumi ezweni lapho i-VPN ibhalwe khona, esikhundleni sokuba nekhathalogi yezwe lapho sikhona ngempela.
Yingakho singasebenzisa i-VPN ukwenza sesha izindiza sengathi sikwelinye izwe, ngakho-ke izindleko zethikithi elifanayo zingancishiswa. Manje kufanele uqale ukuntywila emakhasini ehlukene wewebhu ukuthola indiza eshibhe ekufanele kangcono ngezinsuku, ukuma ...
Kumele kuqashelwe ukuthi i-VPN ngayinye inika amandla wokuxhuma kusuka kwinani elithile lamazwe. Akuwona wonke ama-VPN aqondana nenani elifanayo lamazwe futhi ngokufanayo izizwe ziyatholakala Lapho uthola khona ikheli le-IP, ngakho-ke uma ufuna izwe elithile, kungcono ukuthi uphenye inketho ngayinye, ukuze uthole ukusebenza okufunayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » Futhi ngenzani ngendiza yami? Inkinga yomhlaba
Yini ongayibona eSalzburg